शाखः समूहले छिटै स्तरीय होटल सञ्चालनमा ल्याउँदै छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता शाखः समूहले छिटै स्तरीय होटल सञ्चालनमा ल्याउँदै छ
अन्तरवार्ता 15 views
शाखः समूहले छिटै स्तरीय होटल सञ्चालनमा ल्याउँदै छ
गणेशभक्त शाखः अध्यक्ष, शाखः समूह
अध्यक्ष, शाखः समूह
उमेरले ८८ वर्ष कटेका गणेशभक्त शाखः विभिन्न औद्योगिक व्यवसायको समूह शाखः समूहका अध्यक्ष हुन् । नेपाल पेण्ट इण्डष्ट्रिज, शाखः स्टील इण्डष्टिज, यूनिसा पोलिकेम इण्डष्ट्रिज, शाखः मेटल एण्ड एलाइड इण्डष्ट्रिज र शाखः एण्ड कम्पनी प्रालिको नेतृत्व गरेका शाखः अहिले पनि व्यवसायमा सक्रिय नै छन् । नेपालको औद्योगिक विकासमा लामो समयदेखि योगदान गरेको भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले ६७औं वार्षिक साधारणसभामा उनलाई ‘लाइफटाइम एचिभमेण्ट अवार्ड’बाट सम्मान गरेको छ । इमानदारीलाई आफ्नो व्यावसायिक सिद्धान्त ठान्ने उनी नेपालको औद्योगिक विकासमा जति नीतिगत समस्या छन्, त्योभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारीतन्त्रले ‘घुमाउने’ प्रवृत्तिलाई ठान्दछन् । यसैकारण नेपालमा औद्योगिक विकास हुन नसकेको बताउने उनीसँग शाखः समूहको विगत, वर्तमान र भविष्यका योजनाका साथै नेपालको औद्योगिक विकासका समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका टीपी भुसालले गरेको कुराकानी :
नेपालको औद्योगिक विकास पुर्या एको योगदानको कदरस्वरूप शाखः समूहको अध्यक्षको रूपमा तपाईंलाई नेपाल चेम्बर अफ कर्मशले ‘लाइफटाइम एचिभमेण्ट अवार्ड २०१७’ बाट सम्मान गरेको छ । यो सम्मानलाई कसरी लिनु भएको छ ?
कुनै पनि सम्मान पाउनु आफैमा गर्वको विषय हो । यसले एकातर्फ हौसला बढाउँछ भने अर्कोतर्फ जिम्मेवारी पनि थपिएको महसूस हुन्छ । नेपालमा चेम्बरको इतिहास लामो छ । २००९ मा स्थापना भएको चेम्बरमा म २०१४ देखि २०१९ सम्म निरन्तर विभिन्न पदमा रहेर काम गरें । चेम्बर स्थापनाको शुरूदेखि नै त्यहाँ मेरो योगदान रह्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्थापना पनि यसैले गरेको हो । पछि म नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको सदस्य भएँ । पछि त्यता पनि सक्रिय भएँ । यद्यपि चेम्बरमा पनि थिएँ । शायद त्यसैले होला अहिले मलाई यो सम्मान मिलेको । यो सम्मानको गरिमा कायम राख्न आउँदा दिनमा पनि म प्रयत्नशील रहनेछु ।
शाखः समूहको यात्रालाई अहिले फर्केर हेर्दा कस्तो पाउनु हुन्छ ?
नेपालमा औद्योगिक विकासको इतिहास लामो छैन । जतिबेला चेम्बर गठन भयो, त्योबेला जुद्ध शमशेरले विराटनगरमा खोलेको विराटनगर जुट मिल, मोरङ कटन मिल आदि केही उद्योग मात्र थिए । अहिले उद्योगको सङ्ख्या बढेको छ । तर जुन रूपमा विकास हुनु पथ्र्यो त्यो भने भएन । शाखः समूहले पनि जति गर्न सक्नु पथ्र्यो त्यो गर्न सकिएन कि भन्ने लाग्छ । नेपालमा उद्योग गरौं भनेर करोडौं लगायो, एकपछि अर्का समस्याहरू सृजना भइरहन्छन् । हामी पनि त्यो समस्याबाट मुक्त छैनौं । थुप्रै उतारचढावबाट हाम्रो समूह यो स्थानमा आएको छ । कतिपय उद्योग बन्द पनि भए, कतिपय उद्योगलाई परिमार्जन गर्दै सञ्चालन गरिएको छ । यद्यपि, आज शाखः समूहको जुन इज्जत र ब्राण्ड छ, त्यसमा गर्व छ । हामी सधैं गुणस्तरीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गर्छौं । विभिन्न खालको उतारचढाव व्यहोर्दै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं । हिजोका दिनमा एकपछि अर्को उद्योगमा लगानी गर्दै आयौं, कति सफल भए कति असफल । कतिपय असफलताले सिकायो पनि । अहिले पनि त्यो सिक्ने र सिकाउने क्रम जारी नै छ ।
हिजोको दिनमा र आज उद्योग व्यवसाय गर्दा के फरक पाउनु हुन्छ ?
नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्नु न हिजो सजिलो थियो न आज छ । कतिपय कुराहरू आज सजिलो देखिन्छ । तर, नीतिगत कुरामा जुनखालको परिवर्तन हुनु पर्थ्यो, त्यो भएन भन्ने हो । सानो उदाहरणका लागि, जतिबेला हामीले उद्योग शुरू गर्यौंा, हाम्रै समयमा कोरियामा पनि केही व्यवसायीले उद्योग शुरू गरेका थिए । हामी त्यहाँ भ्रमणमा जाँदा सामान्य कार्यालयमा बसेर उद्योग शुरू गरेका उनीहरू केही वर्षमै धेरै माथि पुगिसकेका थिए । पछि त्यहाँ जाँदा उनीहरूको विस्तार यति तीव्र र व्यापक थियो कि हामीलाई विश्वासै नलाग्ने । उनीहरू ठूलो प्रगति गरिसकेका थिए, तर हामी जहाँको त्यहीँ । यस्तो किन भयो भने हामीकहाँ सरकार उद्योगको विकास हुनुपर्छ, उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्नेमा कहिल्यै लागेन । ऐननियम कानून बनेको भए पनि ती ऐनकानूनमा कसरी अल्झाउने भन्ने खालको मात्र भए । कुनै उद्योगी व्यवसायीले लगानी लगाउँछु, उद्योग खोल्छु, रोजगारी सृजना गर्छु, देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्छु भन्दा सरकारले उनीहरूलाई कसरी सजिलोे बनाउन सकिन्छ त्यतातिर पो सोच्नुपर्ने । तर, यहाँ कसरी बिगार्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी छ । मलाई के लाग्छ भने नेपालमा औद्योगिक विकास नहुनुमा जति नीतिगत समस्या छ, त्योभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारीतन्त्रले ‘घुमाउने’ प्रवृत्ति छ । हुने कामलाई समेत विभिन्न बहानामा बिगार्ने, यताको उता, उताको यता गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । त्यसको समाधान जरूरी छ । अनि बल्ल उद्योगीले लगानी गर्छ । प्रविधि र पूर्वाधारको हिसाबले हिजोभन्दा आज सजिलो त भएकै छ । तर, यो परिवर्तनले मात्र नेपालमा उद्योगको विकास हुँदैन ।
अहिले त विदेशी लगानी भित्र्याउनेसम्ममा कानुन निर्माण भएका छन् । यसले अहिले सहज भयो भन्ने लाग्दैन ?
पहिलो कुरा नीतिगत स्पष्टता र अर्को सहजता नै हो । चाहे स्वदेशी उद्योग होस् चाहे विदेशी उद्योग, कुनै पनि उद्योगले कानूनी स्पष्टता र त्यसको सहजता हेरेर मात्र लगानी गर्छ । लगानीमैत्री वातावरण हुनु पर्यो । आज एउटा उद्योग सञ्चालन गर्न कतिओटा सरकारी अड्डा चहार्नु पर्छ ? एकद्वार नीति हुनु पर्यो । राज्यले उद्योगीलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्यो , अनि मात्र लगानी आउँछ । त्यसमा पनि हामीसँग धेरै उद्योगको कच्चा पदार्थको लागि विदेशमा निर्भर रहनु पर्छ । भन्सार नीति के छ ? सहुलियत कस्तो छ ? यी सबै सहज हुनुपर्छ । यहाँ उत्पादित सामानभन्दा बाहिरबाट आयात गरेको सामान सस्तो हुन गयो भने नेपाली उद्योग कसरी चल्ने ? विदेशी लगानीकर्ता पनि यी सबै हेरेर मात्र नेपालमा लगानी गर्न आउने हो ।
तपाईंले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको क्षेत्रमा अहिले अन्य थुप्रै उद्योगहरू आएका छन् । यसले तपाईंको व्यवसायमा कस्तो असर पारेको छ ?
हरेक उद्योग व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा नै छ । हाम्रो समूहले विभिन्न उद्योग सञ्चालन गरे पनि शाखः स्टील हाम्रो मुख्य उत्पादन हो । अन्य उद्योगहरू त्यसपछि आउँछन् । उनीहरूको पनि आआफ्नो ठाउँमा प्रतिस्पर्धा छ । प्रतिस्पर्धाले एकातर्फ चुनौती सृजना गरेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ अवसर पनि । अहिले हामी चुनौतीलाई अवसरको रूपमा पनि यसलाई लिएर अगाडि बढिरहेका छौं । हिजो मेनुअल रूपमा चल्दा गाह्रो थियो । अहिले हामी नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं । देशैभरि हाम्रो उत्पादन पुर्याोएका छौं । बजार विस्तार भइरहेको छ ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विदेशी तयारी मालसामान आयातले नेपाली उद्योगलाई समस्या भएको हो ?
हरेक कम्पनीको बजारमा जाने आ–आफ्नै रणनीति हुन्छ । उपभोक्ताको पनि ती कम्पनीप्रति एक किसिमको दृष्टिकोण हुन्छ । खास गरी छड, सिमेण्ट उद्योगमा नेपालमा प्रतिस्पर्धा नै छ । कतिपय ठूला लगानीमा सञ्चालित छन् । जहाँसम्म विदेशी तयारी मालसामानको कुरा छ, कच्चा सामग्री आयात गरेर यहाँ उत्पादन गरेको सामानले बाहिरबाट आएको तयारी सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । यसमा नीति निर्माण गर्नेले पनि बुझेको वा बुझ्न चाहेको देखिँदैन । छड उत्पादनमा ९ प्रतिशत जति नोक्सान हुन्छ । एउटा फलाम पगालेर छड बन्छ, त्यो जलाएर छडको रूपमा बाहिर निस्किँदा केही भाग उडेर नोक्सान हुन्छ । अर्को काट्ने समयमा टुक्राको ३ प्रतिशत जति नोक्सान हुन्छ । यसरी उत्पादनमै ९ प्रतिशत नोक्सान हुनछ । यो सबै विषयमा हामीले बुझाउन खोज्दा बुझ्दैनन् वा बुझ्ने प्रयत्न गर्दैनन् । अनि त्यसको असर सीधै मूल्यमा पर्छ, उपभोक्तामा पर्छ ।
अहिले छड तथा सिमेण्ट उद्योगीहरूले विनाकारण मूल्य बढाए भनेर निर्माण व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन् । देश सङ्क्रमण कालको अवस्थामा तपाईंहरूले मूल्यवृद्धि किन गरेको हो ?
अनावश्यक मूल्यवृद्धि भएको होइन । २ वर्षअघि छड बनाउन प्रयोग गरिने बिलेटको भाउ प्रतिटन साढे ३ सय डलर थियो, अहिले ५ सय डलरको हाराहारीमा छ । भारतबाट कच्चा पदार्थ पहिले रेलमा अनि ट्रकमा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । रेलबाट ल्याउँदा अलि सस्तो थियो । अहिले भारतको रेलवे विभागले रेलबाट ल्याउन दिएको छैन । ट्रकबाट आउँदा फेरि भाडा बढ्यो । अहिले भारतबाट ल्याएर सीमामा अनलोड गर्दा राख्ने ठाउँ छैन । सीमा क्षेत्रमा निर्बाध रूपमा आयात गर्दा ओभरलोड निषेधित गरेका कारण पनि मूल्यवृद्धि भएकोे हो । भारतर्फको झण्डै २४/२५ किमीसम्म ट्रकको लाइन लाग्दा डिटेण्शन चार्ज बढ्न गई उत्पादन लागतमा वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण ढुवानी भाडा अत्यधिक बढ्न गई उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि हुन गएको छ । हामीले ४ महीनाअघि अर्डर गरेको सामान अझै आएको छैन । यसका विभिन्न कारण छन् । जसरी मौका छोपेर मूल्य वृद्धि गरियो भनिएको छ, त्यो होइन ।
अहिले विकास निर्माणको क्रम बढिरहेको छ । छडको बजार माग पनि त बढेको होला ?
निश्चय नै यसको माग हरेक वर्ष बढेको छ । माग बढ्नुको कारण एउटा विकास निर्माण त हुँदै हो । त्यसमा पनि छडको प्रयोगको अवस्था पनि परिवर्तन भएको छ । पहिले जुन खालको डण्डी प्रयोग हुन्थ्यो, अहिले त्योभन्दा मोटो डण्डी प्रयोग हुन थालेको छ । अहिले घरको जगदेखि नै मोटो डण्डीको प्रयोग बढेको छ । मेरो विचारमा छडको विक्री हरेक वर्ष १५ प्रतिशतभन्दा धेरै बढी रहेको छ । विकास निर्माणले यो क्रमलाई अझै बढाउने देखिन्छ ।
हरेक व्यवसायीका आआफ्नै व्यावसायिक सिद्धान्त हुन्छन् । तपाईंका व्यावसायिक सिद्धान्तहरू केके हुन् ?
उद्योग व्यवसाय विश्वासले चल्ने हो । तुरुन्तै पैसा कमाउनका लागि चलाउने हो भने अर्कै कुरा हो । तर जब समाजमा, उपभोक्तामाझ विश्वास गुम्छ, सबै गुम्छ । विश्वास र इमानदारी नै मेरो व्यावसायिक सिद्धान्त हो । लप्पनछप्पनले छोटो समयका लागि काम गर्ला, दीर्घकालसम्म जान विश्वास जित्नै पर्छ ।
अहिले शाखः समूहको कुनकुन क्षेत्रमा लगानी छ ? नयाँ क्षेत्रमा जाने सोच छ कि ?
नेपाल पेण्ट इण्डष्ट्रिज, शाखः स्टील इण्डष्ट्रिज प्रालि, यूनिसा पोलिकेम इण्डष्ट्रिज, शाखः मेटल एण्ड एलाइड इण्डष्ट्रिज र शाखः एण्ड कम्पनी हाम्रो समूहले सञ्चालन गरेका उद्योगहरू हुन् । यसमा हाम्रो मुख्य उद्योग स्टील नै हो । अब उद्योग नै थप्ने सोचमा हामी छैनौं । सेवा उद्योगको रूपमा होटलमा लगानी गरिरहेका छौं । केही समयपछि हाम्रो समूहले स्तरीय होटल शुरू गर्नेछ । होटल शुरू गर्ने केही वर्षअघिकै सोच हो । विभिन्न कारणले ढिला भयो । फेरि नयाँ पुस्ता उद्योगभन्दा अन्य व्यवसायतिर रुचि राख्न थालेको छ ।
नेपालका प्रायः सबै उद्योगमा पुस्ता हस्तान्तरणको अवस्था छ । तपाईं पनि ८८ वर्ष पुग्नुभयो, शाखः समूहमा पुस्तान्तरण कहिले हुन्छ ?
उमेरका हिसाबले अब धेरै काम गर्न त सकिँदैन नै । हिजो मेरो जोड उद्योगमा थियो । अहिलेको पुस्ता उद्योगमा भन्दा व्यापारमा जोड दिन्छ । हाम्रो र उनीहरूको चाहना पनि फरक होला । मेरोमा पनि मसँगै नातिहरू पनि व्यवसायमा आइसकेका छन् । लामो समयदेखि काम गरेको आफ्नो अनुभव बाँड्न पनि म अझै सक्रिय छु । तर, हाम्रो समूहका विभिन्न उद्योगहरू छोरा तथा नातिहरूले हेर्ने गरेका छन् । होटलप्रतिको रुचि पनि नातिहरूको हो ।
नेपालको समग्र औद्योगिक विकासमा शाखः समूहको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
उद्योग व्यवसाय कुनै व्यक्तिले सञ्चालन गरे पनि त्यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा देशको समग्र विकासमा सहयोग गरेको हुन्छ नै । यसो नै गर्‍यौं भन्ने त छ्रैन । तैपनि सानोठूलो रोजगारी सृजना भएको छ । हाम्रो उत्पादनले विभिन्न संरचना निर्माण भएका छन् । हाम्रो लागि यो नै ठूलो कुरा हो ।
अहिले रोजगारीका लागि लाखौं युवा बाहिर छन् । नेपालमा जनशक्तिको अभाव छ । युवालाई स्वदेशमै केही गर्न तपाईंको सुझाव के छ ?
नेपालमा रोजगारीको अवसर भएर विदेश जाने पनि होलान् । अर्कोतर्फ जति गएका छन्, त्यसमध्ये धेरै जना तल्लो स्तरको श्रम गर्न गएका छन् । पहिले त दक्ष हुनुपर्योत । दक्ष भयो भने देश बाहिर गएर काम गर्दा पनि श्रमको मूल्य बढी हुन्छ । नत्र जोखीम सधैं रहिरहन्छ । उद्योगको विकास, रोजगारी सृजना भन्ने कुरा सरकारको नीतिले पनि निर्धारण गर्ने हो । हामी युवालाई बाहिर जान प्रेरित गरिरहेका छौं वा स्वदेशमै केही गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिएका छौं । सकेसम्म आफ्नै माटोमा परिश्रम गर्दा त्यसले राष्ट्र निर्माणमै सघाउ पु¥याउँछ । हामी सबै त्यसतर्फ क्रियाशील रहन जरूरी छ ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । अब सबैको मुद्दा आर्थिक समृद्धि भन्ने छ । नेपालको औद्योगिक भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
राजनीतिक परिवर्तनले मात्र विकास सम्भव छैन । त्योअनुरूपको नीतिगत व्यवस्था जरूरी छ । उद्योग र उद्यमशीलताको विकासले मात्र आर्थिक समृद्धि आउने हो । सरकारको ध्यान त्यता केन्द्रित हुनुपर्यो । नत्र भने भएका उद्योग बन्द हुँदै जाने र नयाँ नआउने हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी मात्रै भयो भने हामीले खोजेको समृद्धि सम्भव छैन ।